Tag: ngalaba mgbanwe | Martech Zone
Tag: ngalaba mgbanwe
Okwu blog bu ihe nno nma. Afọ ole na ole gara aga, mgbe m dere Blogging Blogging for Dummies, ahụrụ m blog ahụ n'anya n'ihi na ọ na-egosi mmetụta nke mmadụ na nghọta. Ndị ụlọ ọrụ agaghịzizi adabere na ịkọ akụkọ iji kpughee ọdịbendị ha, akụkọ ha, ma ọ bụ ọganihu ha. Ha nwere ike ịgbasa ndị ahụ site na blọọgụ ụlọ ọrụ ha wee wuo obodo site na mgbasa ozi mmekọrịta nke gosipụtara ụdị ha. N'ime oge, ha nwere ike iwulite ndị na-ege ntị, obodo,
Etu aga - esi degharịa azụmaahịa gị n’enweghi okporo ụzọ
Ọ bụghị ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ihe niile achọpụtala oge ha wepụtara weebụsaịtị ha. N'ụzọ megidere nke ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke obere ụlọ ọrụ enweghị ọbụna weebụsaịtị, ma ya fọdụzie ụdị onyogho ha chọrọ ịzụlite. Ozi ọma ahụ bụ na ọ bụghị iwu na ị ga-achọpụtarịrị ya ozugbo. Mgbe ị na-amalite, ihe kacha mkpa bụ kpom kwem - ịmalite. Na-enwe oge iji mee
Nke a nwere ike ịbụ googlecide… ma ọ bụ blogocide, anyị ga-ahụ. Edere m ụnyaahụ na ekwesịghị m itinye aha m dị ka aha ngalaba m. Ka o sina dị, ị ga-achọpụta bido taa na agbanweela m ngalaba saịtị ahụ dknewmedia.com ka martech.zone. Aga m ebugharị URL ahụ maka ọnwa 6 sochirinụ ruo mgbe okporo ụzọ na dknewmedia.com ga-apụ, mgbe ahụ, m ga-ezumike nka kpamkpam. Aga m eme ka ị mara etu mgbanwe siri sie ike. Olileanya ihe niile na-aga nke ọma! Mara: